3 musharrax oo Muqdisho soo gaarey, qorshaha ay maaggan yihiin & mid aan la ogayn + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka 3 musharrax oo Muqdisho soo gaarey, qorshaha ay maaggan yihiin & mid...
3 musharrax oo Muqdisho soo gaarey, qorshaha ay maaggan yihiin & mid aan la ogayn + Sawirro
(Muqdisho) 20 Nof 2020 – Waxaa maanta magaalada Muqdisho xilliyo isu dhow ka degey qaar ka mid ah musharrixiinta u taagan xilka madaxtinnimada qaranka, kuwaasoo magaalada geliyey xaalad olole.
Waxaa halkaa gaarey RW hore Md Xasan Cali Khayrre oo ay soo dhoweeyeen dadwaynihii ugu badnaa isagoo ay sidoo kale barbar joogeen qaar ka mid ah siyaasiyiintii aadka u mucaaradsanaa xilligii uu xilka hayey qaarkood.
Waxaa sidoo kale halkaa gaarey Wasiirkii hore ee Warfaafinta, Md Daahir Maxamuud Geelle, kaasoo ay isna dad badan oo si wanaagsan u abaabulani soo dhoweeyeen.
Waxaa isna soo degey hoggaanka Xisbiga Wadajir, Md Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo ay dad badani kusoo dhoweeyeen Garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde.
Waxaa sidoo kale horay Muqdisho usoo gaarey Md Cabdikariin Xuseen Guuleed, waxaana la filayaa in musharrixiintan ay kusoo biiraan qaar kale kuwaasoo la hadal hayo inay Muqdisho ku yeelan doonaan kulan qaadan doona muddo 3 maalmood ah oo ay kusoo qaadi doonaan doorashada soo socota iyo moowqifka midaysan ee ay ka taagan yihiin.
Lama oga se inay leeyihiin wax ka badan qorshihii soo jireenka ahaa ee hadba ku dhisnaa in loo midoobo bara bixinta qofka markaas kursiga ku fadhiya ee aanu jirin qorshe kale oo ka dhexeeysa musharrixiinta kursiga doonaysa.
Previous articleWasiir Dibadeedkii hore ee dalka Suudaan oo wajihi kara dil toogasho ah (Dembiyada loo haysto & ragga la eedaysan)